Ahmiyada weyn ee ay leedahay tamarta dabaysha iyo jardiinooyinkeeda | Cusbooneysiinta Cagaaran
Ahmiyada weyn ee ay leedahay tamarta dabaysha
Tomas Bigordà | | Awoodda dabaysha, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Si loo falanqeeyo muhiimadda ay leedahay tamarta dabaysha ee qaybta tamarta adduunka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo dhammaan iskuxirayaasha silsiladdaas ayaa loo baahan yahay si loo sameeyo jawharadda taajka, marawaxadaha dabaysha caanka ah taasi waxay ka kooban tahay beeraha dabaysha, bahal teknoolojiyadeed ee isbeddelka hadda jira.
Marka xigta waxaan sharrax ka bixin doonnaa sida beeraha dabayluhu u shaqeeyaan. Ka sokow muhiimadda weyn ee ay leedahay tamarta la soo saaray iyaga noloshooda, iyo beddelka mustaqbalka dhow.
1 Hawlaha beeraha dabaysha
2 Muhiimadda tamarta dabaysha
3 Beerta dabaysha ee ugu weyn Spain waxay ku taal El Andévalo (Huelva)
4 Aaway Andévalo?
Hawlaha beeraha dabaysha
Ka faa'iidaysiga a 1 MW marawaxadaha lagu rakibay meel dabayshu ka dhacdo way gaari kartaa iska ilaali 2000 tan oo kaarboon laba ogsaydh (CO2), haddii korontada la soo saaray ay sii daayeen dhirta kuleylka kuleylka.
Iyadoo la tixgelinayo dhammaan xiriiriyeyaasha silsiladda, tamarta iyo qalabka loo baahan yahay labadaba wax soo saar Marka laga hadlayo kala daadinta marawaxadaha dabaysha, waxaa xusid mudan in isu dheelitirka tamarta la cunay ay tahay mid xiiso leh.
Wareegga nolosha ee marawaxadaha dabaysha ayaa sidoo kale la darsay. A 2,5 MW marawaxadaha dabaysha, leh nolol waxtar leh oo qiyaastii 20 sano ku hoos jirta xaalado hawl-qabad oo caadi ah, way awoodaa soo saar ilaa 3.000 MW sanadkiiba, taas oo ku filan isticmaalka qiyaastii 1.000 ilaa 3.000 qoys (oo ku xiran isticmaalka) sanadkiiba. Nolosha waxtarka leh ee marawaxadaha dabaysha ayaa lagu qiyaasaa inta udhaxeysa 20 ilaa 25 sano.
Waad kala saari kartaa a "yar " marawaxadaha dabaysha (laga bilaabo dhowr tobanaan watts ilaa 10 KW) oo loo isticmaalo kan biyo soo dhaaminta ama siinta koronto meelaha go'doonsan, ee marawaxadaha dabaysha ee ugu awoodda badan (laga bilaabo 50 KW ilaa 5 MW) oo ku xiran shabakadaha korantada, kuwaas oo ah kuwa sii kordheysa ee la soo saaray. Kuwa dambe guud ahaan waxaa dib loogu ururiyaa waxa loo yaqaan Eolico Park.
Ku dhowaad dhammaan marawaxadaha dabaysha ee soo saara korantada waxay ka kooban yihiin rotor leh garbaha ama garbaha wareega ee wareegga jiifa. Kani waa ku lifaaqan isku-gudbinta farsamada ama labanlaabma iyo, ugu dambeynti, a Matoor koronto, labaduba waxay ku yaalliin sagxadda laga laalay taaradda dusheeda.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in dhererka daab Waxay noqon doontaa go'aan in la soo saaro tamar ama xawaare ka badan ama ka yar, maadaama ay sii weynaanayaan aag xaaqan ayaa gaari doona waxayna si cad u soo saari doontaa a tamarta kordhay.
Muhiimadda tamarta dabaysha
Kuwa ka soo horjeeda beeraha dabaysha ee dalalka warshadaha horumaray badiyaa waxay ka doodaan wasakhda aragga, buuqeeda iyo in wax soo saarkeedu ku filnayn daboolida baahiyaha tamarta. Ku tamarta dabaysha Waa in loo tixgeliyaa inay tahay il tamar cusub, tamar nadiif ah, isbadal ku imaanaysa isla markaana kaabaya noocyada wax soo saarka kale.
Sida for raaxo la’aan in ay sababi karto, waligood wax badan bay ahaan doonaan ka hooseeya kuwa ay sababaan noocyada kale ee tamarta sida, tusaale ahaan, sida dhuxusha ama tamarta nukliyeerka.
Ha iloobin in ay tahay tamar ay soo saaraan hawada, iyo dhaqdhaqaaqiisa, waa tamar jireed sidaas darteed ma wasakhaynayso, waana markaa mid ka mid ah tamarta ugu nadiifsan Maxaan ka heli karnaa.
Caqabada mustaqbalka ayaa ah hel ili jaban, oo aan wasakheyn, dib loo cusboonaysiin karo lagana heli karo tamar dhammaantood wadamada adduunka (way adagtahay lobbiyada halkaas ka jira), taasoo u saamaxaysa gaadiidka, warshadaha iyo qoysaska inay yareeyaan ku tiirsanaanta aan maanta ku qabno saliida, waxayna umuuqataa tamarta dabaysha waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira.
Beerta dabaysha ee ugu weyn Spain waxay ku taal El Andévalo (Huelva)
Isbaanish, ahaanshaha sida ay tahay a hormood iyo wadan hogaamiya adeegsiga tamarta dabaysha, in kastoo sanadihii ugu dambeeyay hakad la geliyay jardiinooyin cusub. In kastoo, haddana waxaan ku faani karnaa inaan leenahay beertada dabaysha ugu weyn qaaradda Yurub.
Waa dhismaha El Andévalo, oo leh ay 292 MW Awoodda waxaa kaliya ka sarreeya Whitelee park, oo ku taal Scotland, oo wadar ahaan ah 322. Arrinta xiisaha leh ayaa ah in labaduba ay leeyihiin hal shirkad, waana Isbaanish, Iberdrola Renovables, iyo labadaba marawaxadaha ka socda shirkadda Basque ee Gamesa.
Markii Andévalo la lahaa dhowr sano ka hor, shirkaddu waxay xoojisay booskeeda hogaamiyaha tamarta Awoodda dabaysha labadaba Andalusia, oo leh 851 MW, iyo Spain oo dhan, leh 5.700 MW.
Waxay ku taal inta u dhexeysa degmooyinka Huelva ee El Almendro, Alosno, San Silvestre iyo Puebla de Guzmán, oo ku taal koonfurta gobolkan Andalus. Dhismaha, oo bilaabay inuu socod 2010Waxay ka kooban tahay sideed beerood oo dabaylo ah: Majal Alto (50 MW), Los Lirios (48 MW), El Saucito (30 MW), El Centenar (40 MW), La Tallisca (40 MW), La Retuerta (38 MW) , Las Cabezas (18 MW) iyo Valdefuentes (28 MW).
Isku soo wada duuboo, 292 MW ee aynu soo sheegnay, oo u saamaxaya wax soo saarka korontada sanadlaha ah ee warshadani aadka u weyn inay bixiso 140.000 oo guri waxaana loo xisaabinayaa inay ka fogaanayso sii daaya qiiqa jawiga oo aan ka yarayn 510.000 tons ee CO2.
Waxay ahayd Febraayo 2010 markii Iberdrola Renovales waxay qaadatay lahaanshaha dhismaha oo dhan. Beerta dabaysha ee Los Lirios ayaa ahayd tii ugu dambaysay ee ay hesho, gudahood iibinta beeraha dabaysha iyo heshiiska iibsiga ee Andalusia oo ay la saxeexdeen Gamesa. Hawlgalkan, oo qayb ka ah heshiiskii ay labada shirkadood kala saxeexdeen 2005 iibinta beeraha dabaysha ee Andalus. Isaga Kharashkii ugu dambeeyay wuxuu dhaafay 320 milyan oo yuuro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Ahmiyada weyn ee ay leedahay tamarta dabaysha
ANA SPAIN dijo
Sidee ayey suurtagal u tahay in la go'aamiyo meesha dhulka dabaysha laga rakibay?
Maxay yihiin arrimaha go'aaminaya qaabeynta iyo rakibideeda?
Jawaab ANA ESPAÑA
Avangrid, oo ah shirkad hoosaad ka ah Iberdrola, ayaa Apple u dhisi doonta beer dabaysha laga dhaliyo
110 megawatt qoraxda SuperPark ee Guillena (Seville)